Entertainment – Bihani Khabar
काठमाडौं : नेपाल आइडलको सुरुदेखि नै आफ्नो स्वरको जादु चलाउन सफल पोखराकी नीलिमा थापा शुक्रबारको इपिसोडबाट बाहिरिएकी छन्। नीलिमाले भर्खरै कक्षा १२ सकाएकी छन्। धेरैजनालाई साथी बनाउन नसक्ने रिजर्भ स्वभावकी नीलिमाले आइडलबाट बाहिरिएपछि सधैंभरि गायनलाई नै साथी बनाएको बताइन्। भन्छिन्, ‘गीत नै मेरो साथी, गीत नै मेरो जिन्दगी।’ नीलिमा पोखरा …
November 27, 2018	Entertainment 0
मोरङ, उर्लाबारी घर भई हाल जापान बस्दै गरेका मञ्जुल मितेरीले भाइरल ब्वाई गायक अशोक दर्जीको आवाजमा केही समयअघि एउटा गीत रेकर्ड गराएका थिए । गीतको केही अंश यस्तो छः डिलमा फूलु हिलोमा फूलु, उस्तै मेरो रंग जहाँ फूले पनि कमलको फूल हो, म छर्न चाहन्छु सुगन्ध बाढी आउन सक्छ यहाँ, …
नायक आयुष्मान देशराज जोशी र नायिका प्रियंका कार्कीको जीवनशैली गज्जबको छ । उनीहरु जे गर्छन्, विन्दास गर्छन् । तर, पनि यो जोडी कहिलेकाही के गर्ने र के नगर्ने भन्ने कुरा छुट्याउन नसक्दा विवादमा पनि पर्छ । तर, यो जोडीले विवादलाई पनि चर्चाको रुपमा नै लिने गरेको छ । हालै नायिका …
दिशा पटानीको विकिनी तस्बिरले हंगामा
बलिउडमा नायिका दिशा पटानीको फिगरको चर्चा सधै हुन्छ । अहिले त पटानीको चर्चा चलचित्रमा पनि छ । ‘एम एस धोनी’ नामक चलचित्रबाट बलिउडमा पाइला राखेकी दिशाले चलचित्र ‘बागी २’मा अभिनय गरेपछि उनको चर्चा चुलिएको हो । झनै, उनी र नायक टाइगर श्राफको प्रेम चर्चाले पनि सधै चर्चा पाउँछ । उनै, …
नायक अनमोल केसी यूवतीहरुको लागि ढुकढुकी नै छन् । अनमोल केसीको जिन्दगीमा अहिलेसम्म यूवती आएको चर्चा खासै सुनिदैन । चलचित्र ‘जेरी’ रिलिजको समयमा आना शर्मासँग उनको प्रेमको चर्चा भएको थियो । तर यसपछि अनमोल प्रेमको खबरले खासै चर्चामा छैनन् । अहिले नेपाली मिडियामा अनमोल केसीको प्रेमको खबर सार्वजनिक हुन थालेको …
मिसवर्ल्डमा श्रृंखलाका १५ प्रतिस्पर्धी : कवयत्रीदेखि ‘बक्सर’सम्म
१० मंसिर, काठमाडौं । चीनमा आगामी ८ डिसेम्बरमा ६८ औं मिस वर्ल्डको फाइनल राउण्ड हुँदैछ । नेपालकी सुन्दरी श्रृंखला खतिवडाले प्रतियोगितामा आफ्नो बलियो उपस्थिति देखाइरहेकी छन् । यसपालि मिस वल्र्डका दाबेदारहरुको चर्चा गर्दा श्रृंखलाको नाम कसैले पनि छुटाएको पाइँदैन । यूट्युव, अनलाइन पोर्टल र ब्लगहरुले बिजेताको पूर्वानुमान गर्ने क्रममा उनलाई …
गेमराज गिरीको ‘केरा लैजाउँ पावर’
‘केरा लैजाउँ पावर’ बोलको गीतको भिडियो सार्वजनिक भएको छ । गेमराज गिरीको आवाज, स्वर्गिय भूपेन्द्र प्रकाशको शब्द तथा संगीत रहेको यो गीतको ओर्जिनल भर्सन महेन्द्र प्रकाश गिरीले तयार पारेका हुन् । गीतको भिडियोलाई मौसम हिमालीले निर्देशन गरेका हुन् । भिडियोमा करण चैसरको छायांकन, नविन घर्ती मगरेको सम्पादन छ । भिडियोमा …
हामी ४ बर्षदेखि प्रेममा थियौः दीपिका
October 27, 2018	Entertainment 0
चलचित्र ‘छक्का पन्जा ३’ले हलमा बम्पर कारोबार गरिरहेको समयमा यो चलचित्रकी नायिका दीपिका प्रसाइले निर्देशक दिवाकर भट्टराइसँग इन्गेजमेन्ट गरेकी छिन् । आखिर, दिवाकरसँग इन्गेजमेन्ट गरेकी दीपिकालाई उनको के कुरा मनपर्‍यो ? उनीहरुको प्रेम कहिलेदेखि थियो ? यो बिषयमा दीपिकाले अनलाइनखबरसँग कुराकानी गरेकी छिन् । दिवाकरजी र तपाइविचको प्रेम स्विकार अहिले …
ज्याति मगरले फेरि गरिन् अर्को उत्पात (तस्बिरसहित)
लक्कि ड्रमा पथरीका राईले पाए ‘महिन्द्राका मोजो’ बाईक